मौन अवधि सुरु, के गर्न पाइन्छ ? के गर्न पाइँदैन ? उल्लंघन गरे जरिवाना - inaruwaonline.com
मौन अवधि सुरु, के गर्न पाइन्छ ? के गर्न पाइँदैन ? उल्लंघन गरे जरिवाना
प्रकाशित मिति: सोमबार, आषाढ १२, २०७४ समय: १:४३:३०
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले मतदानको समय सुरु हुनु ४८ घण्टाअघिबाट नै मौन अवधि सुरु हुने भन्दै सो अवधिमा राजनीतिक दलहरूले प्रचारप्रसारलगायतका कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने बताए । ‘दलहरूले मौन अवधिमा प्रचारप्रसार जन्य कुनै पनि गतिविधि गर्न पाउँदैनन् । त्यसो गर्नु आचारसंहिताविपरीत हुन्छ । सो किसिमका गतिविधि भएको पाइए कारबाही हुन्छ,’ प्रमुख आयुक्त यादवले भने ।
त्यसैगरी मतदान केन्द्रमा रहेको राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको प्रतिनिधिले निर्वाचन चिह्न वा संकेत नभएको पहिरन, परिचयपत्र र ब्याज मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने, कुनै किसिमको सवारीसाधन प्रयोग गरी आवतजावत गर्न वा कसैलाई पनि लाने वा ल्याउने गर्न नहुने उल्लेख छ । शारीरिक रूपले अशक्त वा हिँडडुल गर्न नसक्ने मतदाताका लागि मतदान अधिकृतले तोकिदिएको सवारीसाधन भने प्रयोग गर्न सकिनेछ ।आजको राजधानी दैनिकमा खबर रहेको छ।